कैलालीमा फागुन २९ गतेदेखि हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधी खुवाइने
कैलाली/कैलालीमा हात्तीपाइले रोग विरुद्धको फागुन २९ गतेदेखि चैत्र एक गतेसम्म औषधी खुवाइने भएको छ ।
प्रत्येक गाविस र नगरपालिकाका बुथबाट ८ लाख २३ हजार बढीलाई औषधी खुवाइने लक्ष्य रहेको जिल्ला जनस्वाथ्य कार्यालय कैलालीका वरिष्ठ जनस्वाथ्य अधिकृत शिवदत्त भट्टले बताए ।
जिल्लाको कुल जनसंख्याको ६ प्रतिशत मानिसमा हात्तीपाइलेको संक्रमण रहेको बताउँदै उनले करिब ८ लाख २३ हजार जनसख्या रहेको कैलालीमा ३ हजार ७ सय १७ जनामा हात्तीपाइलेको संक्रमण गरेको पनि उनको भनाई छ ।
नेपाल सरकारको हात्तीपाइले रोग निवारण अभियान अन्तर्गत कैलालीमा पनि सो रोग विरुद्धको औषधी खुवाउने भएको हो ।
लामखुट्टेको टोकाइवाट सर्ने हात्तीपाइले रोग सरुवा रोग समेत भएकाले यसबाट बाच्नका लागि सरकारले निशुल्क औषधी बितरण गर्दै आएको छ । चिकित्सकहरुले हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधीले सामान्य असर गर्ने भएपनि नआत्तिन आग्रह गरेका छन् । अभियान अन्तर्गत देशभरीका ४० जिल्लामा यो औषधी खुवाउन लागिएकोे हो ।
२ वर्ष नपुगेका केटाकेटी, गर्भवती महिला, ७ दिनसम्मका सुत्केरी, छारे रोगी तथा विरामीले भने यो औषधी खान नहुने चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
क्युलेक्स जातको संक्रमित पोथी लामखुट्टेको टोकाईबाट सर्ने यो रोगले शारीरिक असक्तता र अपाङगता बनाउने रोग हो । सन् २०२० सम्म नेपालबाट हात्तीपाईले निवारण गर्ने लक्ष्य अनुसार सरकारले अभियानकै रुपमा प्रत्येक वर्ष हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधी सुवाउने अभियान गर्दै आएको छ ।
लेमनग्रासबाट तेल प्रशोधन सुरु
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका १३ सेवकलियास्थित फूलवारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले लेमन ग्रास नामक घाँसबाट औषधी जन्य तेल प्रशोधनको काम सुरु गरेको छ ।
सामुदायिक वनको खाली जमिनमा केही वर्ष अघि दिगो विकास नामक गैर सरकारी संस्थाको सहयोगमा औषधी जन्य जडीबुटीको खेतीको सुरुवात गरेको उक्त समुदायिक वनले तेल प्रशोधनको काम सुरु गरेको हो ।
हाल उ सामुदायिक वन सुगन्धित घाँसबाट प्रशोधन गरेको औषधी जन्य तेल बजारमा बिक्री वितरण गरिरहेको छ ।
वन संरक्षण संगै राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि समुदायको काम गर्न पनि सहज भएको बताउँछन् वनका पूर्व अध्यक्ष पुरन चौधरी । उहाँ वन संरक्षण संगै मजा आम्दानी भएपछि स्थानीय उपभोक्ताहुरु जडिबुटी खेतीप्रति आकर्षित भएको जनाउनुभयो ।
दिगो विकास नामक गैर सरकारी संस्था सामुदायिक वनमा वातावरण संरक्षण संगै उपभोक्ताहुरुको दिगो जिविकोपार्जन तथा आर्थिक उन्नतीमा टेवा पुगाउँने उदेश्यले सामुदायिक वनमा जडिबुटी खेती गर्न लगाई प्रशोधन गर्ने मेसिन पनि सहयोग गरेको थियो । जुन कारण पनि स्थानीयहरु जडिबुटीप्रति हौसिएका हुन् । सामुदायिक वन भित्र लेमन ग्रास, पामा रोजा, सिट्रोनेला मेन्थालगायत विभिन्न जातको जडीवुटीको प्रजातीको खेती भैरहेको छ ।
उपभोक्ताहरु प्रशोधिन तेल जिल्लाका भिभिन्न औषधी उत्पादक कम्पनीहरुलाई बिक्रि वितरण गरिरहेका छन् । उत्पादित तेल प्रति लिटर ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँमा बिक्रि वितरण भैरहेको जनाइएको हो ।
उक्त सामुदाायिक वनको करिव २८/२९ हेक्टर क्षेत्रफलमा जडिबुटी खेती गरिएको छ ।
घाँटी बसेमा, दिसामा रगत देखा परेमा र घाऊ भएमा:तुलसीदिसामा
चिकित्सकहरूका अनुसार तुलसीमा सयौं रोग निको गर्ने क्षमता छ ।यसमा पात, हाँगा, फूल, जरा, बीउ सबै उत्तिकै महत्व का छन् । यसले भोक जगाउने, रुचि जगाउने तथा पाचनक्रिया बढाउनुका साथै झाडावान्ता पनि रोक्ने कार्य गर्दछ । मानिस मृत्यु शैयामा हुँदा प्राण त्याग्नुअघि तुलसीको बोटसंगै राख्नाले तथा तुलसीपत्र खुवाउनाले मरेपछि मोक्ष पाउँछ भनी शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ । तुलसी रोपेको चार सय मिटर वरपरको वातावरणलाई तुलसीले सुगन्धले शुद्ध पार्छ भन्ने विश्वास छ्र । तुलसी, वटवृक्ष वरिपरि र तुलसीको छाया वरिपरि र यसको हावाको परिधिभित्र कुनै पनि विषाक्त कीटाणुहरू टिक्न सक्तैनन् दीर्घरोगीहरूसमेत तुलसीको सेवनले रोगमुक्त भएको कुरा वैज्ञानिकहरू पनि बताउछन् ।
८,१० वटा तुलसीपात चौथाइ भाग जाईफल पिनेर खाएमा ठिक हुन्छ ।
आउँ, शुल उठेमा
१०, १२ तुलसीको पात मिश्रीसंग पिनेर खाने गरेमा ठिक हुन्छ र आवश्यकता परेमा एक हप्तासम्म खानु होला ।
दिसामा रगत आएमा
१,२ चम्चा तुलसीको गेडा आधा ग्लास पानीमा बेलुका भिजाएर बिहान खाने गरेमा ठिक हुन्छ ।
तुलसीको पात १०, १२ वटा खाएर पानीले निल्ने र तुलसीको पातको लेदो नरिवलको तेलमा फिटेर गुद्धद्वारको घाऊमा लगाउने गरेमा ठिक हुन्छ ।
घाँटी बसेर बोल्नै नसक्ने भएको छ भने १०,१२ पात तुलसी ४/५ दाना मरिच र मिश्रीको टुक्रासँग चपाएर निल्दा घाँटी बसेको २,३ मात्रामै ठीक भएर आउँछ ।
सभारः न्यूज २४
सुआहाराले ल्याउँदै छ, गर्भवती महिला र बालबालिकामा परिवर्तन
फाेटाेः लखन चाैधरी
( हसुलिया स्वास्थ्य चाैकीका इन्चार्ज रितेश जैसवाल सुरक्षित मातृत्व तथा स्तनपानबारे स्थानीय अामाहरूलार्इ जानकारी गराउँदै )
हसुलिया, २७ । गर्भवती महिला र २ बर्ष मुनिका बालबालिकाहरुको पोषणमा सुधार ल्याउन कैलालीमा संचालित सुआहारा कार्यक्रमले अहम भूमिका खेल्न थालेको छ ।
महिला स्वाथ्य स्वमसेविका र सामाजिक सहजकर्ताहरुले गर्भवती तथा २ बर्ष मुनिका बालवालिकाहरुका आमाहरुलाई तालिम दिएपछि उनीहरुले सुरक्षित मातृत्व तथा पोषणको बारेमा जानकारी लिन थालेका छन् ।
कैलालीको हसुलिया ८ डम्माराकी स्थानीय रेनुका चौधरीले सुआहारा कार्यक्रमबाट आफुले सिकेको कुराहरुको यसरी बयान गरिन्–‘सुआहारा कार्यक्रम लागु भएपछि बालबालिकाहरुको पोषणको बारेमा थप कुरा सिक्न पाएका छौ, बालबालिकाहरुको लागि जाउलो, लिटोलगायत खानपान कसरी तयार गर्ने तथा स्तनपान कसरी गराउँनेवारे पनि सिकिरहेका छौ ।’
त्यस्तै उनले आफुलयायत छिमिकीहरु आफ्ना बालवालिकाको स्वाथ्य अवस्था सुधार गर्न पहिलेको भन्दा गम्भिर भएको र पहिले–पहिले घरमै सुत्केरी गराउनेहरु अहिले स्वास्थ्य संस्था जान थालेको तथा गर्भजाँचका लागि पनि नियमित अस्पताल जान थालेका बताइन् ।
स्थानीय महिला शोभा विकको भनाई पनि रेणुका चौधरीको जस्तै छ । उनले पनि कार्यक्रम पूर्व आफुलाई बालबालबालिकाहरुको पोषण तथा स्वास्थ्य अवस्थावारे विस्तृत रुपमा जानकारी नभएको बताइन् । तर हाल कार्यक्रम लागु भएपछि धिरै कुरा सिक्न पाएको बताइन् । ‘बच्चालाई कस्ता खानेकुरा दिनुपर्छ, आमाले आफ्नो बच्चालाई कसरी, कति पटक र कुन आसनमा स्तनपान गराउ्रँनुपर्छ, गर्भ पहिले र पछि के–के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कार्यक्रम लागु भएपछि मात्रै थाहा भो’, उनले अगाडी भनिन् ।
सुआहाराका फिल्ड सुपरभाईजर मञ्जु चौधरीका अनुसार गर्भवती महिलाको ९ महिना अर्थात दुई सय ७० दिन र बच्चा जन्मेपछिको दुई वर्ष अर्थात सात सय १२ गरी एक हजार दिनलाई सुनौला हजार दिन मानिएको छ । उक्त सुनौला एक हजार दिनलाई पोषणयुक्त व्यवहारमा ध्यान दिन तथा सुधार गर्ने कार्यक्रमको प्रमुख उदेश्य रहेको सुपरभाइजर चौधरीको भनाई छ ।
( सुआहाराका फिल्ड सुपरभाईजर मञ्जु चौधरी स्थानीय महिलाहरूलार्इ सुनाैलाे एक हजार दिनबारे जानकारी दिदै )
कैलाली जिल्लामा युएसएडको आर्थिक सहयोगम तथा फाया नेपलको संयुक्त साझेदारीमा कार्यक्रम लागु भएको छ । गर्भवती महिला र २ वर्ष मुनिका बालबालिकामा पोषणको अवस्थमा सुधार ल्याउने उदेश्यले कार्यक्रम संचालनमा ल्याईएको हो । सुआहारा कार्यक्रमकी पोषण अधिकृत प्राकृती पन्तले कार्यक्रम अन्तरगत सुरु चरणमा स्थानीय महिला स्वास्थ्य स्वयसेविकाहरुलाई पाँच दिने सुरक्षित मातृत्व तथा पोषण सम्बन्धी तालिम दिएको जानकारी दिइन् । त्तपश्चात महिला स्वास्थ्य स्वायसेविका मार्फत गर्भवती महिला र दुई वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुको आमाहरुलाई गर्भ अवस्था, सुत्केरी अवस्था, दिइने खोपलगायतको वारेमा प्रशिक्षित गराउँनु संगे आवश्यक परामर्श दिने कार्य भैरहेको बताइन् ।
कार्यक्रमबाट महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउन धेरै सहयोग पु¥याएको बताउँछन् हसुलिया स्वाथ्य चौकीका प्रमुख रितेश जैसुवाल । ‘कार्यक्रमको प्रभाव नै मान्नु पर्छ, आफ्नो अवस्था तथा बच्चाको अवस्थावारे केही बोल्न नसक्ने आमाहरु विना हिचकिचाहट आफ्नो मनमा लागेको जिज्ञासा पुरा गरिरहेका छन् ।’
के मुसाको मासु सुरक्षित छ ?
लखन चौधरी / कैलाली
पश्चिम नेपालको थारू समुदायमा मुसाको मासु खाने प्रचलन उहिल्यैदखि चल्दै आएको छ । तर प्रमुख परिकार मध्ये एक मानिने मुसाको परिकार अब कतिको सुरक्षित तथा खान योग्य छ ? भन्ने कुरा बहसमा तानिएको छ । पछिल्लो समय सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा मुसाबाट सर्ने ’स्कर्ब टाइफस“ नामको रोगको सङ्क्रमणको समस्या बढ्दै गएपछि सबैको ध्यान केन्द्रीत भएको हो ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक शिवदत्त भट्टका अनुसार विगत पाँच/छ महिनायता यस क्षेत्रमा यो रोगको सङ्क्रमणबाट ५६ जना बिरामी भएकोमा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । यो रोगबाट मृत्यु हुनेमध्ये एकजना जनस्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका कर्मचारी पनि रहेको तथ्य वाहिर आएपछि मुसाको परिकार बनाई उपभोग गर्ने समुदायलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ ।
सेती अञ्चल अस्पताल धनगढीका अनुसार उपियाँ, उडुस लागेको मुसाले मानिसलाई टोक्दा यो रोग सर्ने गर्दछ । रोग लागेपछि बिरामीको आँखा रातो हुने, धेरै ज्वरो आउने, हात खुट्टा दुःख्ने भई समयमै उपचार नपाएमा किड्नी, कलेजोमा असर पार्नुका साथै, रक्तसञ्चार प्रणालीमा जटिलता उत्पन्न गराउने बताइएको छ । समयमै उपचार भएमा रोगको उपचार सम्भव भए पनि उपचार पाउन नसक्नेको विभिन्न जटिलता उत्पन्न भई मृत्युसमेत हुन सक्ने बताइएको छ ।
यस क्षेत्रका डडेलधुरा, बैतडी, अछाम, दार्चुला, डोटी जिल्लाको तुलनामा कैलाली, कञ्चनपुर जिल्लामा यो रोगको समस्या बढी देखिएको बताइएको छ । डा. शुभेषराज कायस्थ नेतृत्वको चिकित्सकको टोलीले गएको साउन, भदौ र असोजमा तीन महिना लगाएर यो रोगबारे अध्ययन अनुसन्धान गरेको थियो ।
मुसाले टोक्दा रोग सर्ने भएता पनि पशु रोग विशेषज्ञहरु मासुलाई राम्ररी पकाएर खाँदा रोग नसर्ने बताएका छन् । जिल्ला पशु सेवा कार्यालय कैलालीका प्रमुख तथा वरिष्ठ पशु चिकित्सक डिकरदेव भट्टले मानिसको रगत संग मुसाको रगत प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएमा रोग सर्ने जानकारी दिए । तर राम्ररी पकाएर खाँदा भने नसर्ने उनको भनाई छ । मुसाको काँचो मासु तथा रोगी र घाउ खटिरा भएका मुसाको मासु भने नखानु नै बृद्धिमानी हुने चिकित्सक भट्टको सुझाव छ ।
मरुवक बाइस देउता